FARHAN AKHTAR အမြင့်၊ အသက်၊ ဇနီး၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊ - ဘောလီးဝုဒ်သရုပ်ဆောင်တွေ
Farhan Akhtar အမြင့်၊ အသက်၊ ဇနီး၊ ရည်းစား၊ မိသားစု၊
အလုပ်အကိုင် သရုပ်ဆောင်၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ ဒါရိုက်တာ၊ ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ၊
ခန္ဓာကိုယ်အတိုင်းအတာများ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) - ရင်ခေါင်း - ၄၁ လက်မ
အချစ် ရုပ်ရှင်ဒါရိုက်တာ): Dil Chahta Hai (၂၀၀၁)
ရုပ်ရှင် (သရုပ်ဆောင်): Rock On !! (၂၀၀၈)
ရုပ်ရှင် (ထုတ်လုပ်သူ): ဒွန် (2006)
၂၀၀၂ ခုနှစ် အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဆုအတွက်အကောင်းဆုံးဆု၊ Dil Chahta Hai အတွက်အကောင်းဆုံးဇာတ်ညွှန်းဆု
၂၀၀၉ Rock On အတွက်အကောင်းဆုံးအမျိုးသားအလှမယ်
၂၀၁၂ ခုနှစ် Zindagi Na Milegi Dobara အတွက်အကောင်းဆုံးထောက်ပံ့သူ
၂၀၁၄ Bhaag Milkha Bhaag အတွက်အကောင်းဆုံးသရုပ်ဆောင်
၂၀၀၂ ခုနှစ် Dil Chahta Hai အတွက်ဟိန္ဒူဘာသာတွင်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားဖြစ်သည်
၂၀၀၉ Rock On အတွက်ဟိန္ဒူဘာသာအတွက်အကောင်းဆုံးရုပ်ရှင်ဇာတ်ကား !!
မွေးနေ့9ဇန်နဝါရီ 1974
မွေးရပ်မြေ မွန်ဘိုင်း, အိန္ဒိယမဟာရပ်ရှ
ဇာတိမြို့ Lucknow, Uttar Pradesh (မွန်ဘိုင်းအခြေချ)
ကျောင်း မင်ဘီးမြို့ Maneckji Cooper ကျောင်း
ကောလိပ် / တက္ကသိုလ် ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးနှင့်စီးပွားရေးကောလိပ် (တက်ရောက်သူအခက်အခဲကြောင့်ဒုတိယနှစ်တွင်ကောလိပ်မှကျောင်းထုတ်ခံခဲ့ရသည်)
လိပ်စာ Sea Spring ဘန်ဂလိုအမှတ် ၁၊ B J လမ်း၊ Bandstand၊ မွန်ဘိုင်း - 400050
ဝါသနာ Gadgets များစုဆောင်းခြင်း၊ သီချင်းဆိုခြင်း
Tattoo (s) သူ့ညာဘက်ပခုံးပေါ်မှာ လင်းပိုင် / ငါးမန်း
ရေးရာ / မိန်းကလေး Adhuna Bhabani (ဆံပင်ညှပ်သမား)
Shraddha Kapoor က (မင်းသမီး)
Shibani Dandekar (မင်းသမီး VJ)
လက်ထပ်ထိမ်းမြားရက် နှစ် - ၂၀၀၀ ခုနှစ်
ဇနီး / အိမ်ထောင်ဖက် Adhuna Bhabani (m.2000-div.2016)
ကလေးများ သူတို့က : မဟုတ်ဘူး
သမီးတို့ : Shakya & Akira
မိဘများ ဖခင် - Javed akhtar (စာရေးဆရာနှင့်စာရေးဆရာ)
အမေ - Honey Irani (မင်းသမီးနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ၊ မွေးဖွားစဉ်က Farhan ၏မိခင်)၊ Shabana Azmi (မိထွေး)
နှမ - Zoya Akhtar (အကြီးအကဲ၊ ဒါရိုက်တာနှင့်ဇာတ်ညွှန်းရေးသူ)
အကြိုက်ဆုံးအစားအစာများ အိမ်လုပ်အစားအစာ၊ ဂန္ထဝင်မွန်ဘိုင်းဗာဒါပပို၊
အကြိုက်ဆုံးသရုပ်ဆောင် (များ) ဘောလီဝုဒ်: Guru dutt Bimal ရွိုင်း Raj Kapoor က , ဗီဂျေး Anand
ဟောလိဝုဒ် ရောဘတ်ဒီနီရို၊ မာတင်စကာဒီ၊ Ridley Scott, Woody Allen, Billy Wilder
အကြိုက်ဆုံးဒါရိုက်တာ Alfred Hitchcock
အကြိုက်ဆုံးမင်းသမီး Preity Zinta
အကြိုက်ဆုံးရုပ်ရှင် Oz ၏ Wizard (1939)
ကားများစုဆောင်းခြင်း Range Rover Red Edition, M350 CDI SUV ကား,
လစာ (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ₹ 10 ကုreေ / ရုပ်ရှင်
အသားတင်ပိုင်ဆိုင်မှု (ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်) ₹ ၁၄၀ Crores (ဒေါ်လာ ၂၂ သန်း)
Farhan Akhtar နှင့်ပတ်သက်သောလူသိနည်းသောအချက်အလက်အနည်းငယ်သာ
Farhan Akhtar ဆေးလိပ်သောက်ပါသလား။
Farhan Akhtar သည်အရက်ကိုသောက်ပါသလား
အရက်တစ်ပုလင်းနှင့် Farhan Akhtar
သူသည်ကဗျာဆရာနှင့်စာရေးဆရာများ၏မိသားစုဖြစ်သည်။ သူ့အဘိုးလို Jan Nisar Akhtar သည်အူဒူကဗျာဆရာဖြစ်ပြီးကဗျာဆရာ Muztar Khairabadi ၏မြေးဖြစ်သည်။
သူကအရမ်းဆိုးပြီးလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကလေးတစ် ဦး ရှိ၏ သူမ၏တွေ့ဆုံခန်းတွင်အလုပ်များနေစဉ်အတွင်း Frahan လာပြီးသူမအခန်းသို့ရေချိုးရန်တောင်းဆိုခဲ့သည်ကိုသူမ၏အမေကပြောသည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက်သူမကသဘောတူခဲ့သည် နောက်ပိုင်းတွင် Farhan သည်သူမအိပ်ရာပေါ်တွင်စည်ပိုင်းနှင့်ခွက်နှင့်ရေချိုးနေသည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့သည်။
တစ်ချိန်ကသူသည်စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဘွဲ့ဒုတိယနှစ်တွင် HR ကောလိပ်မှအလုပ်ထုတ်ခံခဲ့ရသည်။
ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်တွင် Yash Raj Films အတွက်ရုပ်ရှင်ဖြန့်ချိသူအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့ပြီး၊ ကြော်ငြာထုတ်လုပ်ရေးအဖွဲ့၏ Script Shop တွင် ၃ နှစ်ကြာအလုပ်လုပ်ခဲ့သည်။
အစပိုင်းတွင်သူသည် Lamhe နှင့် Himalay Putra ကဲ့သို့သောရုပ်ရှင်များတွင်လက်ထောက်ဒါရိုက်တာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ခဲ့သည်။
Farhan Akhtar သည်လမ်နှင့်ဟိမဝန္တာပူရာဒါရိုက်တာတို့အားကူညီခဲ့သည်
'Sholay' ကိုအကြိမ် ၅၀ ကြည့်နေပေမယ့်သူဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့သူကိုရှာမတွေ့ခဲ့ပါဘူး။
သူ့အဖေကွဲသွားတဲ့အချိန်မှာသူဟာငယ်ငယ်လေးကတည်းကပါ။ Javed akhtar , လက်ထပ်မင်းသမီး Shabana Azmi 1984 ခုနှစ်တွင်။
Farhan Akhtar ၏ကလေးဘဝဓာတ်ပုံ
သူကပိုးဟပ်၏တနည်းကား, Katsaridaphobia ရှိပါတယ်သူတစ်နေ့ကကျော်လွှား၏အိပ်မက်မက်။
Farhan သည် Rang De Basanti ရုပ်ရှင်အတွက်ပထမဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်သော်လည်းနောက်ပိုင်းတွင်ထိုရုပ်ရှင်သို့သွားခဲ့သည် Aamir Khan ။
Farhan က Dil Chahta Hai ဟုရေးသည်မှာသူ့အမေကသူမဘ ၀ နှင့်ဘာမှမလုပ်ပါကသူမကိုအိမ်မှနှင်ထုတ်မည်ဟုသူ့အမေကိုပေးသည့်အချိန်တွင်ရေးသားခဲ့သည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်တွင်သူသည်နာမည်ကျော်အလှမယ်ပြိုင်ပွဲဖြစ်သော Femina Miss India တွင်တရားသူကြီး ၉ ဦး အနက်မှတစ် ဦး အဖြစ်ထင်ရှားခဲ့သည်။
သူသည်သူ့ပတ် ၀ န်းကျင်တွင်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းထားခြင်းမရှိသောပစ္စည်းများကိုတွေ့သည့်အခါတိုင်းသူ၏အာရုံကြောများပေါ်သို့ရောက်ရှိသွားသည်
သူသည်အသက် ၂၀ ကျော်ကတည်းကကားစီးရန်သိသော်လည်း Karthik Calling Karthik လက်မှတ်ထိုးချိန်တွင်သူသည်စက်ဘီးစီးရန်သင်ယူခဲ့သည်။
သူသည်သူ၏ရုပ်ရှင်ဖြစ်သော Karthik Calling Karthik အတွက်ရူဘီ၏ဖြေရှင်းချက်ကိုဖြေရှင်းပြီးနောက်သူသည်အလွန်စိတ်အားထက်သန်လာပြီးစွဲလမ်းသွားသောကြောင့်ပါတီများ၊ အပြာများ၊ အစည်းအဝေးများနှင့်မိတ်ဆုံပွဲများတွင်နေရာတိုင်းတွင်ဖြေရှင်းနိုင်ခဲ့သည်။
Rubik ရဲ့ Cube ဖြေရှင်းရေး Karthik Calling Karthik အတွက် Farhan Akhtar
သူ၏ရုပ်ရှင်အများစု၏နောက်ကွယ်အကြောင်းရင်းမှာခင်မင်ရင်းနှီးမှုအပေါ် အခြေခံ၍ ဖြစ်သည်။ သူ့မိဘများကွာရှင်းပြတ်စဲသောအခါသူ့သူငယ်ချင်းများသည်သူ၏အကြီးမားဆုံးထောက်ခံမှုစနစ်ဖြစ်လာသည်။
သူကတစ် ဦး အခန်းကဏ္offeredကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည် Rakeysh Omprakash Mehra ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင်ရိုက်ကူးခဲ့သော 'Rang De Basanti' ရုပ်ရှင်၊ သူအဲဒီအချိန်ကသရုပ်ဆောင်လုပ်နေတာစိတ်ဝင်စားမဟုတ်ခဲ့သကဲ့သို့။
Zindagi Na Milegi Dobara ၏ဇာတ်ညွှန်းကိုရေးသားစဉ်တွင်သူသည်သရုပ်ဆောင်ရန်စီစဉ်ခဲ့သည် Shah Rukh ဒါပေမယ့် SRK ကျောင်းထွက်ခဲ့သည်။ Farhan သည်ရေငုပ်ရေငုပ်ခြင်းကိုကြောက်ရွံ့သူတစ် ဦး ၏အခန်းကဏ္ played မှပါ ၀ င်ခဲ့သော်လည်းစစ်မှန်သောအသက်တာတွင်သူသည်အသိအမှတ်ပြု skydiver ဖြစ်သည်။
Zindagi Na Milegi Dobara ရှိ Hrithik နှင့် Abhay တို့နှင့်အတူ Farhan Akhtar
သူပထမ ဦး ဆုံးတွေ့ဆုံခဲ့သည့်အခါ Milkha Singh က သူ၏အတ္ထုပ္ပတ္တိသုတေသနပြုစဉ်အတွင်း Milka ကပြိုင်ပွဲတစ်ခုအတွက်သူ့ကိုစိန်ခေါ်ခဲ့သည်။ သူကရုပ်ရှင်ထဲတွင် Milkha ရဲ့ဇာတ်ကောင်သို့ရဖို့ 18 လတိကျခိုင်မာစွာလေ့ကျင့်ရေးကိုပြု၏။
နာမည်ကြီးကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး - ဖာရာခန်း နှင့် Sajid Khan က မိမိအဝမ်းကွဲဖြစ်ကြသည်။
ဖာရာခန်းနှင့် Sajid Khan နှင့်အတူ Farhan Akhtar
Farhan Akhtar ကုလသမဂ္ဂအမျိုးသမီးများချစ်ကြည်ရေးပွဲတွင်
ပလူတိုအမည်ရှိခွေးသည် Dil Dhadakne Do ကိုရိုက်ကူးရန်အတွက်သူသည် vanilla ရေခဲမုန့်တစ်လုံးကိုသူ့မျက်နှာပေါ်သို့တင်လိုက်သည်။ ထို့အပြင်ရုပ်ရှင်သည်သူ၏ညီမ Zoya Akhtar နှင့်သူ၏နဝမပူးပေါင်းမှုဖြစ်သည်။
Pallavi Purkayastha အမည်ရှိရှေ့နေသည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစော်ကားမှုခံရပြီးနောက်သူမ၏အိမ်စောင့်ကင်းကသတ်ဖြတ်ချိန်တွင် MARD (အဓမ္မပြုကျင့်မှုနှင့်ခွဲခြားဆက်ဆံမှုဆန့်ကျင်သောအမျိုးသားများ) ကိုစတင်ရန်စိတ်ကူးပေါ်လာခဲ့သည်။
Farhan Akhtar အားဖြင့် MARD
သူ၏အကြိုက်ဆုံးအမျိုးအစားမှာသရုပ်ဆောင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူသည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတုန်းက Stunts များနှင့်လှုပ်ရှားမှုများပြုလုပ်ရန်အလွန်စပ်စုခဲ့သည်ဟုသူကပြောကြားခဲ့သည်မှာသူသည်ညီမ၏နှာခေါင်းကိုအမှားဖြင့်ထိုးနှက်ခဲ့သည်။
Robert DiNero, ကျော်ကြားသောဟောလိဝုဒ်ဒဏ္legာရီသည်သူ၏လှုံ့ဆော်မှုဖြစ်ပါတယ်။
Farhan Akhtar သည်သူ၏ Inspiration Robert De Niro နှင့်အတူ
သူ့နှမအင်တာဗျူးတစ်ခုမှာသူ့အကြောင်းကိုလျှို့ဝှက်ချက်များစွာထုတ်ဖော်ခဲ့သည်။ သူမက Farhan သည်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝကရုပ်ရှင်များစွာကိုကြည့်ရှုခဲ့ဖူးပြီး အကယ်၍ သူသည်ရုပ်ရှင်ကိုကြိုက်နှစ်သက်ပါကသူမကြိုက်နှစ်သက်သောဇာတ်ကောင်များထံအိမ်ထဲ၌ရက်ပေါင်း (သို့) ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အထိလှည့်လည်လေ့ရှိကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။
သူသည်ဘောလီးဝုဒ်ကိုအနှံ့အပြားအဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ သူသည်ဒါရိုက်တာ၊ ထုတ်လုပ်သူ၊ သရုပ်ဆောင်နှင့်အဆိုတော်ဖြစ်သည်။ ဤတွင်အိန္ဒိယ၏တစ်နှစ်တာဆုဆုများကိုပြသထားသောဗီဒီယိုတစ်ခုဖြစ်သည်။
သူ၏ဇနီးဟောင်းအဒူနာသည်သူ့အားခုနစ်နှစ်သက်တမ်းရှိပြီး၊ သူတို့နှစ် ဦး လုံးသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်တွင်လက်မထပ်မှီသုံးနှစ်တိုင်တိုင်ချိန်းတွေ့ခဲ့ကြသည်။
Farhan သည် Pureit၊ Chivas Regal၊ Britannia Nutri Choice ဘီစကစ်၊ IndusInd Bank၊ Dulux Paint နှင့် Titan Industries စသည့်များပြားလှသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များအတွက်ကြော်ငြာများစွာတွင်ပါဝင်ခဲ့သည်။
သူ၏နှမ Zoya က Farhan သည်လိမ်ပြောခြင်းကိုအလွန်သဘောကျကြောင်းဖော်ပြခဲ့သည်။
urave uyire သူရဲကောင်းစစ်မှန်သောအမည်
Hindi အတွက်ဟုအမည်ပေးထားသည့် allu Arjun နောက်ဆုံးပေါ်ရုပ်ရှင်
hai ရုပ်သံအမှတ်စဉ်သွန်းတန်းတူ bhabhiji ghar
Salman Khan ဖခင်နှင့်မိခင်
Anil Kapoor ၏မယားသောသူသည်
ဂျနီဖာ winget အစစ်အမှန်ဘဝလက်ထပ်ခဲ့သည်